महरालाई बाबुरामको चिठी : अपराध स्वीकार्नु नै हित हुनेछ – CBKhabar.com | Nepali News Portal
महरालाई बाबुरामको चिठी : अपराध स्वीकार्नु नै हित हुनेछ
By CB Khabar News Desk / १८ आश्विन २०७६, शनिबार ०७:१५ 2019-10-05 / बिचार
१८ असोज, काठमाडौं । समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई खुला पत्र लेखेर निष्पक्ष अनुसन्धानमा सघाउन सुझाव दिएका छन् । उनले गल्ती वा अपराध गरेको भए त्यसलाई स्वीकार्दै प्रायश्चित गर्नुमै महराको हित हुने बताएका छन् ।
माओवादी आन्दोलनका पूर्वसहकर्मीद्वय डा. भट्टराईले महरालाई पत्रमा भनेका छन्, ‘यदि जानेर वा नजानेर गल्ती वा अपराध भएको हो भने त्यसलाई खुला रूपले स्वीकार्नु र प्रायश्चित गर्नु नै तपाईं स्वयम्, क्रान्तिकारी आन्दोलन र देशको हितमा हुनेछ । भनिन्छ- गल्ती गर्नु अपराध हैन : गल्ती नसच्याउनु अपराध हो ।’
१. माओवादी नेतृत्व तहमा हामी -विशेषतः प्रचण्ड र म) सुरेश वाग्ले र तपाईंलाई उच्च नैतिकवान् र इमान्दार पात्र मान्थ्यौं । हामी वीच विवाद पर्दा तपाईं दुई जनाको कुरालाई हामीले विशेष महत्व दिन्थ्यौं । प्रचण्ड र मेरो वीचमा २०५५-५६ मा पहिलो ठूलो वैचारिक-सांगठनिक बहस हुँदा २०५६ साउन/भदौमा पन्जाबको रोपडमा भएको पोलिटब्युरो बैठकमा तपाईं दुई जनाको सुझाव मानेर हामीले विवाद हल गरेका थियौं । (दुर्भाग्यवस त्यो बैठक सकेर फर्कनेवित्तिकै भदौ २३ गते गोरखामा सुरेश वाग्लेले गौरवपूर्ण सहादत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।)
पछि पोष्टबहादुर बोगटी र तपाईं पार्टीका आदर्श पात्र मानिन थाल्नुभयो । २०७१ सालमा बोगटीजीको दुःखद निधन र पार्टीको क्रमशः ओरालो लाग्दो नैतिक धरातलले आम जनतालाई समेत माओवादी आन्दोलनप्रति वितृष्णा बढाउँदै लग्यो । कांग्रेस-एमाले पहिले नै भ्रष्टाचार र सुरासुन्दरी काण्डले बदनाम भैसकेका थिए । तपाईंको यो पछिल्लो प्रकरण त्यसैले तपाईंको एउटा निजी मामिला मात्र नभएर नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनको वैचारिक-राजनीतिक र नैतिक संकटको एउटा अत्यन्त नकारात्मक बिम्ब बन्न पुगेको छ । यसलाई तपाईं हामी सबैले स्वीकार्नैपर्छ ।
२. माओवादी आन्दोलन यो रसातलको बिन्दुसम्म कसरी पुग्यो ? त्यसको सांगोपांगो विश्लेषण र संश्लेषण छुट्टै गरौंला । हामीले नेपाली क्रान्तिलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शिखरसम्म पुर्‍याएकै हो । यसमा हामीले सामूहिक गर्व गर्नुपर्छ । तर रोजा लक्जेम्बर्गले भने झैं क्रान्ति स्थीर भएर बस्दैन, कित त्यो अघि बढाइनु/बढ्नु पर्छ, नत्र त्यो पछाडि हट्छ ।
त्यस्तै अर्को भनाइ छ- शिखर चढ्न सजिलो हुन्छ तर त्यहाँ टिक्न गाह्रो हुन्छ । अझै अर्को भनाइ छ- क्रान्ति सम्पन्न भएको भोलिपल्ट हिजोका क्रान्तिकारीहरू प्रन्तिक्रान्तिकारीमा बदलिन्छन् ।
यहीँनेर हामी चुक्यौं । मैले यो एउटा शिखर चढेपछि अर्को शिखर चढ्न नयाँ बाटो खोजौं भनेको थिएँ । तर मैले साथीहरूलाई मनाउन सकिनँ । साथीहरू पुरानै शिखरमा बसिराख्न खोज्नुभयो तर वैज्ञानिक रूपमा त्यो सम्भव थिएन । त्यसैले अब क्रमशः साथीहरू पुरानो शिखरबाट खुर्मुरिइरहनुभएको छ । तपाईं (महराजी) को पछिल्लो प्रकरण त्यसैको एउटा नमूना हो ।
३. यो प्रकरणमा तपाईं दोषी हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न म किटेर भन्न सक्दिनँ । सत्य कि तपाईंलाई थाहा छ, कि सम्बन्धित महिलालाई थाहा छ । तर अहिलेसम्म बाहिर आएका कुराबाट शंकाको सुई तपाईंतिर सोझिन्छ । हामीले एसएलसीमा पुष्कर शमशेरको ‘परिबन्द’ कथा पढ्थ्यौं । त्यहाँ परिबन्दले निर्दोष व्यक्ति दोषी ठहरिन्छ ।
हाम्रो जस्तो पितृसत्तात्मक समाजमा अधिकांश रूपमा महिला नै पीडित हुने भए पनि कहिलेकाहीँ पुरूष पनि उत्पीडन वा प्रतिशोध/षडयन्त्रको जालमा पर्नसक्छ । तपाईंको हकमा पनि अन्यथा भएको हुनसक्छ । त्यसनिम्ति पनि तपाईंले सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर कानून बमोजिम न्यायको निरूपण गर्न र आफूलाई निर्दोष सावित गर्न स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गर्नुपर्छ र त्यसलाई सघाउनुपर्छ । त्यसले तपाईंको प्रतिष्ठा घटाउने हैन बढाउनेछ ।
यदि जानेर वा नजानेर गल्ती वा अपराध भएको हो भने त्यसलाई खुला रूपले स्वीकार्नु र प्रायश्चित गर्नु नै तपाईं स्वयम्, क्रान्तिकारी आन्दोलन र देशको हितमा हुनेछ । भनिन्छ- गल्ती गर्नु अपराध हैन : गल्ती नसच्याउनु अपराध हो ।
मध्यरातमा संसद विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा १८ आश्विन २०७६, शनिबार ०७:१५
सांसदहरु दोहोरिएपछि प्रधानमन्त्रीमा ओली र देउवाको दाबी नपुगेको राष्ट्रपतिको ठहर १८ आश्विन २०७६, शनिबार ०७:१५
आज मात्रै २१४ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु १८ आश्विन २०७६, शनिबार ०७:१५
नवलुरमा थप १० दिन निषेधाज्ञा लम्ब्याइयो १८ आश्विन २०७६, शनिबार ०७:१५
कोरोनाबाट चितवनमा एकैदिन १५ जनाको मृत्यु १८ आश्विन २०७६, शनिबार ०७:१५